कृष्ण वली र रुपाले आफ्नो फेसबुकमा खुसि हुदै बिबाहको तेश्रो बार्षिक अबसरमा अर्को खुसीको खबर को जानकारी दिएका छन्। केहि समय अघि सामाजिक संजाल मा रुपा कृष्णको जोडी निकै भाइरल भनेको थियो। धेरैले उनीहरुको जोडीलाई उदाहरनिय जोडीका रुपमा समेत लिएका थिए। रुपा र कृष्ण कलियुगका लागि राधा र कृष्णका जोडी हुन् भन्दा पनि फरक पर्दैन।
खुसीको क्षण सार्वजनिक गर्दै रुपाले आफुलाई आशिर्वाद दिन भनेकी छन् । रुपा कृष्णले आफ्नो विवाहको तेस्रो वार्षीक उत्सवका अवसरमा आफुहरु छिट्टै आमाबाबु बन्ने खबर दिदै तस्बिर सार्वजनिक गरेका हुन् । गर्भवती भएको खबर बाड्दै दुखमा पनि साथ दिएका शुभचिन्तकहरु माझ तस्बिर सार्वजनिक गरेकी हुन् । फेसबुकमा सार्बजनिक तस्विरमा हजारौंले बधाई सुभकामना दिएका छन् ।
निकै दुखद घटना पछि उनीहरु समाजीक संजालमा भाइरल भएका थिए। कल्पनै गर्न नसकिने घटना उनीहरुको जिबनमा घटेको थियो।निकै अप्ठेरो अवस्थामा रुपाले कृष्णलाई साथ दिइन । उनीहरुको जिवनको संघर्ष मानिसको जिवनका लागि प्रेरणा दिने खालको छ । रुपाले दिएको अपार माया र साथकै कै कारण आज उनीहरुको जोडीले जिवनको सबैभन्दा दुखद् अवस्थावाट पार गरेर जिवनलाई सुखद बनाएका छन्।
बिद्युत दुर्घटनामा हात र खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई रुपाको पुरा साथ र माया जिउने आधार बन्यो । हात खुट्टा गुमाएका कृष्णलाई रुपाले माया, साथ र हौसला दुवै दिइन् । कृष्णका लागि हात खुट्टा हाल्न सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न अभियान चालाइयो जसका कारण आर्थिक सहयोग जुट्यो र कृष्णले कृतिम खुट्टा लगाउन सफल भए।
आज आइतबार कुन–कुन राशि भएका व्यक्तिका लागि शुभ ? हेर्नुस
आज ‘पीनम्ब्रल’ चन्द्रग्रहण लाग्दै ! कस्ताे छ असर ? के गर्न हुदैन ?
Previous Article कुनै पनि फाइलमा भाइरस छ कि छैन, यसरि सजिलै थाहा पाउनुस
Next Article लकडाउन खुकुलो बनाउने यस्तो छ मापदण्ड प्रस्ताब